Kitapo miova fanodinana solosaina tsy misy fiatoana tontonana indroa:
● Mifanaraka amin'ny teknolojia fanamafisam-peo mandroso, amin'ny alàlan'ny tsindry ataon'ny polymera handroahana ireo singa misy tombo-kase, hahazoana ny vokatra famehezana tsara indrindra ary hanova haingana kokoa ny écran.
● Mampiasa vy mifangaro avo lenta, aorian'ny fizotran'ny nitrida hanitatra ny androm-piainan'ny vokatra.
● Ny fomba fiasa mifandimby, afaka manome antoka ny fantsom-pitaovana mitohy, ny fitoniana ary ny masontsivana amin'ny famerenana amin'ny laoniny, rehefa manova ny efijery.
● Fampiasana fitaovana fanamafisana anaty, ho an'ny fiarovana azo antoka sy angovo. Tariby mifono feno, ho an'ny fisehoana kanto.
● lamina mitambatra maodely, mety amin'ny masinina extrusion hafa mahazatra, ary mety diovina.